यी टिप्स तपाईंको दाँत दाग अनि Discoloration हटाउन | सेतो दाँत गाइड गर्न सर्वश्रेष्ठ बाटो
सेतो दाँत गाइड गर्न सर्वश्रेष्ठ बाटो
सेतो दाँत , दाँत Whitening , दाँत whitening उत्पादनहरु
घर आधारित सेतो दाँत गर्न
सेतो दाँत सुझाव
यी टिप्स तपाईंको दाँत दाग अनि Discoloration हटाउन
सकेसम्म सेतो रूपमा आफ्नो दाँत रही महंगा र समय-खपत हुन सक्छ. त्यहाँ दाँत सेतो गर्न धेरै तरिकाहरू छन्. यी सुझावहरू प्रयोग गरेर तपाईँले सजिलो फेसनमा सेतो दाँत मदत गर्न सक्छ.
तपाईं आफ्नो दाँत सेतो के गर्नुपर्छ भनेर पहिलो कुरा नियमित दन्त cleanings उपस्थित छ. बनाउन तपाईं आफ्नो दन्त hygienist संग को अर्धवार्षिक सफाई भेटघाट उपस्थित पक्का. यो बरु बस एक दिन पारित गरौं सरल हुन र सायद कठिन भोलि रूपमा दुई पटक लिंदा मा योजना गर्न सक्छ, तर तपाईं कहिल्यै गर्नुपर्छ कुरा. तपाईं एक बानी फस्न गर्न चाहाने र सही फिर्ता वर्ग एक यो एक पटक घुमाउन गरौं र.
टिप! बनाउन कफी गर्न निश्चित, रक्सी र चुरोट. यी उत्पादनहरू समावेश आफ्नो दाँत दाग हुनेछ गाढा रसायन.
यो बारम्बार चुरोट को धुवाँ आफ्नो दाँत discolors भनेर देखाए गरिएको छ.
यो दाँत whitening स्ट्रिप्स प्राप्त गर्न सजिलो छ, र उनि एकदम सस्तो हो. निर्देशन दिइएको समय को लागि आफ्नो दाँत मा बस पट्टी ठाँउ, र आफ्नो दाँत दागरहित बनाइन्छन् गरिनेछ. यी स्ट्रिप्स गरिब परिणाम प्रदान गर्न tended छन्, र तिनीहरूले धेरै लोकप्रिय हुन प्रयोग गर्दा, तिनीहरूले उपभोक्ताहरु द्वारा धेरै रूपमा किनेको छैन.
टिप! तपाईं खानाको खान वा पेय पिउन पछि, तपाईं तुरुन्त आफ्नो मुख बाहिर कुल्ला गर्न पानी प्रयोग गर्नुपर्छ. यो तपाईंको दाँत staining देखि अवशेषहरु राख्न मदत गर्नेछ.
Floss र दैनिक कम्तिमा दुई पटक आफ्नो दाँत माझ्छु. यसले निर्माण र आफ्नो दाँत फोहर र discolored हेर्न बनाउन अघि तपाईंले पट्टिका लड्न मद्दत गर्छ. बरु सबै रात आफ्नो दाँत मा बस्ने पट्टिका अनुमति भन्दा, माझ्छु र सुत्नेसमय अघि floss.
टिप! स्ट्रबेरी संग प्राकृतिक आफ्नो दाँत सेतो. स्ट्रबेरी सेतो दाँत उत्पादन गर्न ज्ञात गरिएको छ.
तपाईंले केही दाँत whitening, उत्पादनहरु को उत्पादन हुन सक्छ एउटा संवेदनशीलता विकास हुन सक्छ. यो एकदम कष्टकर हुन र छोटो समय हुन सक्छ तर गर्न सक्नुहुन्छ यो अझै पनि दुख्छ. तपाईं यो संवेदनशीलता ग्रस्त भने, तपाईं कुनै पनि whitening, प्रयोग गर्न जारी गर्नु अघि आफ्नो दन्त चिकित्सक भ्रमण. उहाँले एक उत्पादन सिफारिश गर्न सक्छन् भनेर बाटो आफ्नो दाँत प्रभावित हुने छैन.
तपाईं आफ्नो दाँत सेतो लागि यो सुरक्षित छ भन्ने सुनिश्चित गर्न आफ्नो दन्त चिकित्सक देखि एक चेक-अप प्राप्त. हरेक घर दांत उत्पादन प्रयास आफ्नो समय र पैसा बर्बाद नगर्नुहोस्. आफ्नो दन्त चिकित्सक गरेको विशेषज्ञता परेर तपाईं लागि सबै भन्दा राम्रो काम गर्दछ उत्पादन फेला एक कहीं अधिक कुशल माध्यम हो.
टिप! पानी धेरै पिउने आफ्नो दाँत सेतो राख्न मदत गर्न ठूलो प्रविधी छ. एक बारम्बार आधारमा पानी पिउने गठन देखि दाग रहन मदत गर्नेछ र ताजा rinsed आफ्नो दाँत राख्नेछ.
तपाईं आफ्नो दाँत प्राप्त गर्न यो धेरै पटक के गर्न धेरै दाग हेर आवश्यक पर्दछ.
एक पराल मार्फत पिउने पेय पदार्थ देखि दाँत staining कम गर्न सक्छ. यो पराल को पेय आफ्नो दाँत दाग छ समय कम मा मद्दत गर्छ. तरल आफ्नो दाँत संग सम्पर्क बनाउने सट्टा आफ्नो घाँटी तल सीधा जान्छ.
टिप! एक दन्त पेशेवर तपाईं काउन्टर उत्पादनहरु भन्दा प्रयोग गर्दा भन्दा उच्च गुणवत्ता परिणाम प्राप्त गर्न सक्छन्. दाँत लागत दांत थप यो विधि, तर परिणाम तत्काल छन्.
आफ्नो दन्त चिकित्सक आफ्नो दाँत वा गिजा harming बिना-घर whitening, किरा प्रभावकारी छन् जो बारेमा सल्लाह दिन सक्षम हुन सक्छ.
राम्रो लागि धूमपान त्याग्नुपर्छ. धूम्रपान आफ्नो समग्र स्वास्थ्य को लागि खराब हुन ज्ञात गरिएको छ, जबकि, यो पनि आफ्नो दाँत लागि खराब छ. वास्तबमा, कसैलाई धूम्रपान छ कि सबै भन्दा स्पष्ट संकेत को एक आफ्नो पहेलो दाँत छ. धूमपान गर्दा यो सेतो दाँत राख्न गाह्रो हुन सक्छ. धूम्रपान छोडने धेरै गाह्रो छ, तर तपाईं जोगिन हरेक चुरोट आफ्नो दाँत मा प्रभाव कम हुनेछ.
टिप! एक बिजुली टूथब्रश खरीद Whiter दाँत प्राप्त गर्न ठूलो तरिका हो. इलेक्ट्रनिक toothbrushes खाना बाट दाग हटाउन मदत, रक्सी र सुर्ती उत्पादन बढी राम्ररी भन्दा मार्गदर्शन टूथब्रश.
तपाईं एक ठूलो smile.Food र अन्य वस्तुहरू आफ्नो दाँत मा निर्माण र discolor वा केही समय पछि उनलाई दाग सक्छ छन् नियमित भने आफ्नो दाँत माझ्छु. के तपाईं नियमित आफ्नो दाँत माझ्छु रूपमा लामो discoloration चिन्तित हुन हुँदैन.
घरमा दांत टूथपेस्ट वा स्ट्रिप्स प्रयोग गर्दा आफ्नो दाँत र गिजा मा कुनै पनि संवेदनशीलता लागि हेर्नुहोस्. यदि यो उत्पन्न गर्छ, तिनीहरूलाई मा धेरै पेरोक्साइड छैन भनेर उत्पादनहरु खोज्न. सामान्यतया, तपाईं उत्पादन प्रयोग थालेका गरेपछि यी सानातिना साइड इफेक्ट केही दिन गायब हुनेछ.
टिप! थाहा रोजेको दाँत विधि कार्य दांत राम्ररी कसरी. तपाईं एक whitening, विधि भन्दा बढी आशा भने डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं निराश हुन सक्छ.
केही स्ट्रबेरी रस संग आफ्नो दाँत लिंदा प्रयास. यो तपाईं सधैं चाहन्थे गरेको मुस्कान प्राप्त गर्न एक एकदम सस्तो तरिका हो.
दाँत तामचीनी को जरा को संक्रमण र दाँत हानि गर्न सक्छ कि अन्य खतराबाट रोक्न सक्षम खनिज पदार्थ को comprised छ. whitening, उत्पादनहरु केही रसायन, बलियो एसिड सहित, आफ्नो तामचीनी बिगार्न र अन्य नकारात्मक प्रभाव हुन सक्छ.
टिप! यो कागति र कागती रस प्रयोग गरेर आफ्नो दाँत brighter रही लागि राम्रो तरिका हो भनेर व्यापक misconception छ, तर यो केवल मामला छ. तिनीहरूले आफ्नो दाँत केहि सेतो सक्नुहुन्छ गर्दा रूपमा यो सही छ, तिनीहरूलाई एक जोखिम पुऱ्याउन.
यदि गति र प्रभावकारिता आफ्नो शीर्ष दाँत-दांत प्राथमिकता हो, तपाईं तुरुन्त आफ्नो डाक्टर भ्रमण गर्नुपर्छ. आफ्नो दाँत Whitening सधैं सजिलो कस्मेटिक काम हो. एक दन्त चिकित्सक देखेर बिना, तपाईंलाई आफ्नो दाँत र आफ्नो सामान्य मौखिक स्वास्थ्य हानिकारक जोखिम.
पक्का नियमित floss बनाउन. निकै Flossing पट्टिका हटाउने एड्स जो, बारी मा, आफ्नो दाँत को staining रोक्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ. दैनिक flossing बानी मा प्राप्त र प्रत्येक भोजन पछि प्रयोग गर्न तपाईंसँग केही पूरा. सुत्नेसमय अघि आफ्नो दाँत floss निश्चित हुनुहोस् तपाईं सबै रात ब्याक्टेरिया आफ्नो दाँत मा रहन दिन छैन भनेर.
टिप! crunchier खाद्य पदार्थ खाने प्रयास. दाँत खाने अजवाइन बढी सेतो बन्न सक्छ, स्याउ र गाजर.
दाँत कलम Whitening आफ्नो दाँत सेतो ठूलो तरिका हुन सक्छ. तिनीहरूले एक ब्लीच गर्न akin छन् किनभने तपाईं gels प्रयोग गर्दा जेल को प्रभाव को wary हुन. तपाईंले यो विधि संग सावधानी प्रयोग र निश्चिन्त तपाईं यसलाई पनि अक्सर के छैन छ.
एक घर whitening, उत्पादन लागि कागति को रस र तालिका नुन मिश्रण. एक कन्टेनर मा छाप मिश्रण राख्न, र यसको बारेमा केही चिन्ता खराब संग समय यसको प्रयोग.
टिप! तपाईं आफ्नो दन्त चिकित्सक संग परामर्श गरेका छन् सम्म दाँत whiteners कहिल्यै प्रयोग गर्नुपर्छ. के तपाईं चम्केको सफेद लागि आवश्यक सबै राम्रो सफाई थियो पाउन सक्छ.
एक बिजुली टूथब्रश आफ्नो मुस्कान रोशन गर्न ठूलो तरिका भन्दा राम्रो छ. बिजुली toothbrushes सफा दाँत राम्रो र सामान्यतया आफ्नो teeth.They को बाहिरको discolorations हटाउन आफ्नो दाँत को सतह क्षेत्र कुनै पनि पहेंलो रंग बन्द सफा गर्न प्रयोग गरिन्छ.
आफ्नो दाँत staining रोक्न चिया र कफी देखि टाढा रहन. जब तपाईं तिनीहरूलाई सबै पिउन यी पेय पदार्थ दाँत discolor.
टिप! भोजन आफ्नो दाँत सेतो र सफा राख्न गम चपाउनु पछि. त्यहाँ whitening, एजेन्ट जो हुनेछ बिस्तारै सनक discolorations समावेश धेरै मसूडों छन्.
नगर्नुहोस् दाँत whitening, रूपमा विज्ञापन जो टूथपेस्ट द्वारा झुक्काएका हुन. तिनीहरूले आफ्नो दाँत सेतो मदत गर्न सक्छ, तर तपाईं अर्को विधि संयोजनमा तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न आवश्यक छ. तपाईं टूथपेस्ट दांत चाहनुहुन्छ भने, बेकिंग सोडा समावेश गर्ने एक मा जिद्दी.
तपाईं एक केले को बोक्रा प्रयोग गरेर आफ्नो दाँत लिंदा प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ. धेरै मानिसहरू यो सरल चाल एकदम प्रभावकारी हुन पाउन. सेतो आफ्नो दाँत माथि केरा बोक्रा को भित्र RUB. त्यसपछि, नियमित लिंदा संग पालन. यो दांत परिणाम तुरुन्तै स्पष्ट हुनेछ.
टिप! यसको सट्टा औषधि पसल को आफ्नो यार्ड मा उत्पादन दांत दाँत लागि खोज. यो ओखर रूखको छाल दाँत देखि दाग हटाइ लागि राम्रो ज्ञात छ.
माथि रही पछि आफ्नो दाँत माझ्छु, र तपाईँले आफ्नो दाँत Whiter प्राप्त हेर्न ओछ्यानमा जान चाहनुहुन्छ रूपमा.
बनाउन तपाईं गर्भावस्था को कुनै पनि अवस्थामा छन् वा स्तनपान भने कहिल्यै प्रणाली whitening एक दाँत प्रयोग गर्न निश्चित. Expectant र नर्सिङ आमा धेरै संवेदनशील मसूडों छ. साथै, यी उत्पादनहरु पाइने रसायन समस्याग्रस्त हुन सक्छ. सट्टा, बस आफ्नो मुस्कान यो विशेष समयमा राम्रो लिंदा र flossing तालिका संग उज्ज्वल राख्न. तपाईंको गर्भावस्था वा सुत्केरी समय पूरा भएपछि तपाईंले सधैं आफ्नो दाँत दागरहित बनाइन्छन् गरेका रोज्न सक्नुहुन्छ.
विधि दांत आफ्नो दाँत आशा गर्न के थाहा तपाईं लागि के रहेको छ. तपाईँको आशा पनि उच्च छन् भने तपाईं निराशा लागि अन्त गर्न सक्नुहुन्छ. आशा के दन्त चिकित्सक सोध्न.
दाँत तामचीनी को जरा को संक्रमण र दाँत हानि गर्न सक्छ कि अन्य खतराबाट दाँत सुरक्षा. उच्च अम्लता या अन्य विषाक्त रसायन समावेश उत्पादन थप तपाईंको दाँत लागि हानिकारक हुन सक्छ तिनीहरूलाई मदत गर्नेछ भन्दा.
तपाईं महंगा हुन सक्छ चाहनुहुन्छ सेतो दाँत रही र एक परेशानी को केहि. धेरै उपकरण र विधिहरू Whiter दाँत गर्न मद्दत गर्न बाहिर छन्. यी सुझावहरू लागू गरेर, तपाईं पेशेवर समाधान आफ्नो पैसा खर्च बिना Whiter दाँत प्राप्त गर्न सक्छ.
टिप्पणी गर्न पहिलो हुनुहोस् - तिम्रो के बिचार छ?
सेतो दाँत गाइड पोस्ट -
विभाग: घर आधारित सेतो दाँत गर्न ट्याग: Discoloration हटाउन, दाँत दाग हटाउन, दाँत दाग
तपाईंको मुस्कान र सेतो दाँत मा विश्वस्त हुन
सल्लाह काम गर्दछ जब तपाईं दाँत सेतो गर्न चाहनुहुन्छ
Whitening दाँत सुझाव तपाईं आज आउट प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ!
सजिलो, तपाईंको मुस्कान चम्किलोपन गर्न सस्तो तरिका
त्यो पहेंलो हाँसो हटाउन र एउटा उज्यालो सेतो मुस्कान प्राप्त
दाग अवशोषित बेकिंग सोडा सौन्दर्य मुस्कान दाँत सेतो सबै भन्दा राम्रो तरिका तपाईंको मुस्कान रोशन तपाईंको मुस्कान को चमक उज्ज्वल सेतो मुस्कान मद्यपानोत्सव मुस्कान दन्त cleanings दन्त चिकित्सक गरेको कोठामा एक उज्ज्वल सेतो मुस्कान प्राप्त घर दाँत whitening, घर whitening, दाँत कसरी सेतो गर्न आफ्नो दाँत कसरी सेतो गर्न लेजर दाँत whitening, लेजर दांत दाँत दाँत सेतो प्राकृतिक तरिका Discoloration हटाउन दाँत दाग हटाउन मुस्कान मद्यपानोत्सव स्ट्रबेरी दाँत विरंजन किरा दाँत brighter दाँत हेरविचार स्वस्थ दाँत दाँत दाग दाँत whitening, पहेंलो दाँत दाँत दाग रोक्न सुझाव टूथपेस्ट दाँत whitening उत्पादनहरु भिटामिन सी Whitening दाँत सुझाव तपाईं आज आउट प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ! आफ्नो दाँत दांत मेरो दाँत सेतो सेतो दाँत घरमा सेतो दाँत आफ्नो दाँत सेतो तपाईंको दाँत सजिलो सेतो Whiter मुस्कान सेतो चम्केको दाँत सेतो दाँत सेतो दाँत सुझाव पहेंलो हाँसो
WordPress द्वारा विषय HeatMapTheme.com